တရုတ်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore, BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore, NT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore, MT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore တင်ပို့သူများ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chuck System ကိုတူးလေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore, BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Chuck Arbore Drilling NT R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Draw ဘားနှင့်အတူ C20-B18 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
လေ့ကျင့်ခန်း Chuck နှင့်အတူကြိတ်စက် B16
C45 R8 B16 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
R8 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
Draw ဘားနှင့်အတူ Chuck Arbore တူး
SK ကိုရှဲလ်အဆုံးစက် Arbore
BT40-FMB22-60 BT-FMB Shell ကစက် Arbore
Draw ဘားနှင့်အတူ C45 MT3-B22 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
Morse က Taper Tang ပုံစံနှင့်အတူ Chuck Arbore Drilling
Draw ဘားနှင့်အတူ DIN228 C45 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
Draw ဘားနှင့်အတူ C20-B18 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
Draw ဘားနှင့်အတူ Chuck Arbore တူး Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck များတွင်အသုံးပြုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ်စက်များအတွက်အသုံးပြုသည်...
R8 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck များတွင်အသုံးပြုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ်စက်များအတွက်အသုံးပြုသည် 1....
SK ကိုရှဲလ်အဆုံးစက် Arbore စံ: MAS403 ပစ္စည်း: 20CrMnTi အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool
BT40-FMB22-60 BT-FMB Shell ကစက် Arbore စံ: MAS403 ပစ္စည်း: 20CrMnTi တော်လှန်ရေး: ≥12000rpm အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT tool...
Draw ဘားနှင့်အတူ C45 MT3-B22 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
Morse က Taper Tang ပုံစံနှင့်အတူ Chuck Arbore Drilling Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
Draw ဘားနှင့်အတူ DIN228 C45 လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore Arbore Morse က Chuck Arbore Drilling Milling, အဆိုပါချိတ်ဆက်လှံတံကိုအဓိကအားဖြင့်အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသံမဏိသုံးပြီးလှံတံကိုချိတ်ဆက်ခြင်း .. ယေဘုယျအားဖြင့်တွင်ခုံ, ကြိတ်စက်, စက်စင်တာစက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလေ့ကျင့်ခန်း Chuck...
တရုတ်နိုင်ငံ လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore ပေးသွင်း
BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
အထဲက Run 0.005mm ထက်လျော့နည်း
Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအဖုံး BT30 / 40/50, CAT30 / 40/50, DIN69871A30,40,50 စီစဉ်
တစ်ဦးကအအေးသုံးမျိုး: ဗဟိုအအေးထောက်ပံ့ရေးအေဒီ / B: ထောက်ပံ့ရေးအေဒီအအေးမပါဘဲဗဟိုအအေးထောက်ပံ့ရေးနှင့် inernal အအေးနှင့်အတူကော်လာမှတဆင့်
ဟန်ချက်ညီ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူရရှိနိုင် G6.3 = 12000rpm G2.5 = 20000rpm
1. carburized အလွိုင်းသံမဏိ, HRC58 ~ 62 မှအလုပ်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာသောထံမှလုပ်ခဲ့ပါ။
2. Taper accurary≤ AT3, ကောင်းစွာမြန်နှုန်းမြင့်အဘို့အဗိုင်းလိပ်တံကန်တော့ချွန်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သေချာ
မြင့်မားသော rpm ပါ3Concentrictity နှင့် runout ≤0.005mm။
BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore
MT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore